उपमेयरमा हारेपछि परिवारको कुटपिटदेखि चौबिस घण्टा थुनिँदाको श्रृंखला |
उपमेयरमा हारेपछि परिवारको कुटपिटदेखि चौबिस घण्टा थुनिँदाको श्रृंखला
प्रकाशित मिति :2019-12-24 15:49:47
सप्तरी । इन्जिनियर श्रीमान् । सदरमुकाममै तीन तल्ले पक्की घर । आफू पनि स्नातक पढेकी उनी भन्छिन्, “सासूको चाहना थियो मेरो पहिलो सन्तान छोरा होस् । त्यस्तै भयो पनि ।” अनि उनलाई लाग्थ्यो म भन्दा भाग्यमानी कोही छैन । असाध्यै माया गर्ने श्रीमान् र त्यो भन्दा स्नेह गर्ने सासूससुरा । आफ्नै व्यापार, श्रीमान्को सरकारी जागिर । माइतीमा पनि आमा बुबालाई लाग्थ्यो मेरो छोरी भन्दा खुशी कोही छैन । उनीप्रति अति नै गर्व र प्रेम थियो उनको परिवारलाई ।
साल २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एउटा दलबाट उपमेयरको टिकट पाइन् उनले । चुनाव हारेपछि जीवनका सबै खुशीहरू वर्षात्को भेल झै बगेर गए । आउने दिनका राम्रा क्षणहरू सबै नराम्रोमा परिणत भए । चुनाव हारेपछि जीवनमा लागेको कालो बादल फाट्छ या फाट्दैन, कुनै शुभ संकेत देखेकी छैनन् उनले ।
चुनावपछि श्रीमती, बुहारी ठूलो पदमा पुग्छे । पैसाको कमी त तीन पुस्तासम्म रहँदैन । परिवारको प्रतिष्ठा बढ्ने, सम्पति बढ्ने उच्च महत्वकांक्षी सपना रहेछ उनको परिवारको । तर त्यसो हुन सकेन । दुर्भाग्यवस् उनले हारिन् । अनि परिवारले देखेको सपना पनि साकार हुने कुरै भएन ।
“यस्ता अनावश्यक सपना देख्नुभएको रहेछ उहाँहरूले । त्यसैले चुनावको परिणाम नआउदासम्म साथ दिनुभो । जब मत परिणाम सार्वजनिक भयो अनि खोसियो सबै खुशी” उनले निकै मन दुखाएर भनिन्, “चुनावी हारको नतिजाले यति धेरै अपहेलित र सहाराविहीन हुन्छु भन्ने कल्पनै गरेको थिइन ।” नेपाली समाजमा एउटी महिला जो परिवारको समर्थन वा असमर्थनका बाबजुद राजनीतिमा प्रवेश गर्छिन्, उनले चुनावी हार जीतको परिणामका आधारमा मुल्य चुकाउनु पर्ने हुँदोरहेछ । उनले पनि आफ्नो चुनावी हारको मुल्य यसरी चुकाउनु पर्यो कि, जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।
“उपमेयरको टिकट पाउनुअघिको जीवन सम्झिन्छु । श्रीमान्, सासूससुराको माया र स्नेहले आँखा रसाउछन् । एउटा चुनावी हारले जिन्दगी नै तहस नहस बनाइदियो” उनी थप्छिन्, “चुनाव हारेर ठूलो अपराध गरेको अपराधी झै महसुस गराइएको छ । घर न घाटको भएकी छु ।”
ठूलो नेता बन्ने रे । देश चलाउने रे । कही नभएको सपना देख्नेवाली । नेतासंग दिनरात दैलो दैलो पसेर आएकी महिलाको के भर ! चाहियो भने एकछिन मै अर्की घर सम्भाल्ने आइहाल्छिन् । परिवार, छिमेकी र आफन्तबाटै यसरी नै बर्सिरहन्छन्, तानाहरू उनीमाथि ।
“इन्जिनियर छोरा छँदैछ, केको रोइलो । तँ चुनावै लड र महान् नेता बन्दै गर । मलाई र यो परिवारलाई तेरो काम छैन । तँबाट जन्मेको छोरो तेरो नभइ मेरो खान्दानको चिराग हो । हामी पाली हाल्छौं । त्यसै पनि तँ जस्तालाई बच्चाको चिन्ता कहाँ हुन्छ र ? तँ राजनीतिमै ठिक छस्, घर र बच्चाको लागि होइन” उनका सासूसुराले दिनरात भनिरहने शब्द हुन् यी । “आफ्नै परिवारको घोचाइ र मेरो सुनाईमा यसरी बितिरहेका छन् मेरा पीडादायी दिनहरू” उनले बर्बर आँशु झारिन् ।
“चुनाव हारेपछिका तीन वर्ष । यो अवधिमा कमसे कम तीन सय पल्ट मलाई मेरै मनले भन्यो ‘तिमी अब मरे हुन्छ । के का लागि बाँचिरहेको ?’ अनि कति दिन त आत्महत्याको प्रयाससमेत गरें । तर मर्न सकिन ।” उनले आफूलाई पटक पटक आत्म हतयाको विचार आउने गरेको बताइन् । यसो भनिरहँदा पनि उनमा जीवनप्रति निराशा झल्किन्थ्यो ।
उनले भोगेको पीडाको सिलसिला यतिमा मात्रै सकिन्न । भर्खरै सासू बितिन् । तर सासूको मृत्यु हुनुको दोष पनि उनैमाथि थोपरियो । उनले चुनाव हारेपछि चुनाव लड्दा खर्च भएको पैंसाको चिन्ताले सासूको मृत्यु भएको हो भन्ने आरोप लाग्यो ।
अब उनलाई पार्टीको काममा हिँड्ने अनुमति छैन । केही गरेर उनी पार्टीको काममा हिँडेको थाहा पाए भने श्रीमान्ले २४ घण्टा थुनेर राख्दिन्छन् । घाँटी त कति पटक थिचियो थिचियो । कुटपिट सहनु त दैनिकी जस्तै । एक दिन चौबिस घण्टा कोठाभित्र थुनिएपछि अब मार्छन् भन्ने लागेर उनले एक जना अधिकारकर्मी साथी र प्रहरीलाईसमेत फोन गरिन् । तर थाहा पाए उल्टै बाँच्न दिन्नन् भन्ने लागेर फेरि फोन गरेर झूठो बोलेको बताइन् । त्यसो भनेपछि प्रहरी पनि आउनु परेन, साथी पनि ।
उनको भनाइ अनुसार यदि चुनाव लड्दा खर्च भएको पैंसा उनको आफ्नै कमाई हुन्थ्यो भने यति अन्याय सहनु पर्थेन । हार ब्यहोर्नु परेको चुनावमा श्रीमान् र परिवारको पैंसा खर्च भएकै कारण उनले यो हदसम्मको पीडा पाइन् । “आफ्नाको त कुरै नगरौं, छिमेकीले समेत घोचपेच गर्छन् । तिमीले त सम्पति मात्रै बर्बाद गरिनौं, सबैको नाक काट्यौ भन्छन्” उनले सुनाइन् ।
आँखिर उनले यो सबै सहेर बस्नुको कारणचाहिँ के त ? बारम्बार प्रश्न गरेपछि उनले भनिन्, “श्रीमान् र परिवारसंग विद्रोह गरेर म जानेचाहिँ कहाँ ? समाजले के भन्छ ? मेरो पीडा कसले बुझ्छ ? तीन वर्षको छोराले बाबाको कुरामा विश्वास गरेर ममीले मलाई माया गर्नुहुन्न भन्छ । फेरि म घर छोडेर गएँ भनें, पछि उसले मलाई के सोच्ला ?” यही डर र अविश्वासले उनी यातनाका बीच त्यही घरमा शरण लिइरहेकी छन् । उनलाई आफ्नो अस्तित्व नै बोध छैन । दिनरातको कचकच र कुटाइ सहँदा सहँदा थिलोथिलो भएको कमजोर शरीर लिएर आफ्नै श्रीमान् र परिवारका विरुद्ध बोल्न कत्ति पनि हिम्मत जुटाउन सकेकी छैनन् उनले ।
फेरि पार्टी अध्यक्षले पनि तपाईंलाई एकपटक फेरि मौका दिन्छौं भनेका छन् रे । त्यही भएर फेरि कुनै चुनावमा उम्मेदवार बन्ने, जित्ने र राजनीतिमार्फत आफूजस्ता दुःखी पीडितका लागि काम गर्ने ठूलो सपना सजाएर बसिरहेकी छन् उनी । “अनि लुकीछिपी भएरै पनि कहिलेकसो पार्टीको काममा हिँड्छु” उनले पार्टी र राजनीतिप्रतिको आस भरोसा बाँकी नै रहेको प्रष्ट्याइन् ।
“एकातिर घर व्यवहार सम्हाल्नु पर्ने । पार्टीमा पनि सबै ठिकठाक भएर बस्नुपर्ने । नत्र भने न घरको, न पार्टीको । महिला पनि मान्छे हुन्, सबै कुरा ठिकठाक मात्रै बनाइरहन त कसरी सक्लान् र ?” सप्तरी हनुमान नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिपलियाको अनुभव छ, “उहाँ(माथिकी महिला पात्र) ले हारेका कारण यतिसम्म पीडा भोग्नुभएछ । निकै दुःख लाग्यो । म त जितेर पनि जितको महसुस गर्न पाएको छैन” उनले भनिन् । सम्पतिमाथि आफ्नो पहुँच नहुँदा महिलाले व्यहोर्नु पर्ने यावत् समस्यालाई नजिकबाट बुझेकी सरिता यदि महिलाको ठाउँमा कुनै पुरुषले चुनाव हार्दा केही फरक नपर्ने बताउँछिन् । कारण चुनावमा लागेको खर्च श्रीमतीकै कमाइ भए पनि पुरुषलाई केही फरक पर्दैन । न त चुनाव हारेका कारण कुनै श्रीमान्ले श्रीमतीको यातना पाउँछ, न त हेलाको पात्र भएर बाँच्नुपर्छ ।
राजविराज नगरपालिकाकी उपमेयर साधना झा विवाहित महिलाका लागि चुनावी हार निकै लज्जा र पीडाको विषय हुने गरेको बताउँछिन् ।
पुरुषका परिवारले चुनावमा उम्मेदवार हुनु र खर्च गर्नुलाई उसको अधिकार र जायज सम्झिन्छ । तर एउटा बुहारी (महिला) को परिवारले उसलाई राजनीति गर्ने छुट दिनु, चुनावमा उम्मेदवार बनाउनु र उसका लागि खर्च गर्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह ठान्छ । साधनाको बुझाइमा यस्तै सोचका कारण चुनाव हारेपछि आफ्नैबाट, आफ्नै घरमा पासो फिँजाइन्छ महिलालाई । आँखिर यो कहिलेसम्म ?
(पत्रकार साह सप्तरीबाट पत्रकारिता गर्नुहुन्छ ।)